र्वार्तामा गएका युक्रेनीले न खाए न केही छोए, किन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperर्वार्तामा गएका युक्रेनीले न खाए न केही छोए, किन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
र्वार्तामा गएका युक्रेनीले न खाए न केही छोए, किन ?
युक्रेनका विदेशमन्त्रीले मंगलबार रुससँग शान्तिवार्ताका लागि गएका अधिकारीहरूलाई केही नखान र केही नछुन चेतावनी दिएका थिए । जसबारे अहिले सबैतिर व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।
जसले उनीहरूको आँखा रातो हुने, दुख्ने, पोल्ने, आँसु आइरहने भएको थियो भने हात र मुखका छाला दुख्नेगरी निस्किने भएको थियो ।
द इन्डिपेन्डेन्टमा उल्लेख गरिएको खबरमा चेल्सीका अब्राहिमोभिचको त सो पोइजनिङपछि केही घण्टासम्म आँखा नै नदेख्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । यसमा उनको आँखा सुन्निएर अचानक धेरै दुखेको थियो । तर पछि उनी ठिक भए । उनी अन्य दुई युक्रेनी अधिकारीहरूसँग सो बैठकमा पुगेका थिए ।
सञ्चार एजेन्सी वाल स्ट्रिट जर्नलले विभिन्न स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यसबारे पहिले खबर गरेको थियो ।
पोइजनिङको शिकार भएका उनीहरूले चकलेट र पानी मात्र खाएको बताइएको छ ।
यसकारण पनि मंगलबार टर्कीमा सम्पन्न अर्को चरणको आमनेसामने वार्ताका लागि युक्रेनका मन्त्रीले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री डिमिट्रो कुलेबाले भनेका छन्, “रुसी पक्षसँग वार्ताका लागि जाने सबै अधिकारीहरूले केही नखानू, केही नपिउनू पनि । विशेषगरी त्यहाँको कुनै सतहमा कतैपनि हातले नछुनू ।”
रोमन अब्राहिमोभिचले फ्रेब्रुअरीको अन्त्यतिर रुससँगको शान्ति वार्तामा सहयोग गर्ने युक्रेनको अनुरोध स्वीकार गरेका थिए । र उक्त पोइजनिङको घटनापछि अझैपनि बैठकमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म यो खबर पूर्ण रूपमा पुष्टि भएको छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पछि ठिक भएपनि यसलाई चेतावनीका रूपमा लिन सकिने विश्वविद्हरूको भनाइ छ ।
मंगलबारको वार्तापछि रुसले राजधानी किभ आसपासको क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि कम गर्ने वचन दिएको छ ।